ကိုယ့်ဝင်ငွေကိုယ်ရှာပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား
June 13, 2019 Cele Love 0
ကိုယ့်ဝင်ငွေကိုယ်ရှာပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား မိန်းကလေးတွေဟာ သဘာဝအားဖြင့် အားနွဲ့တယ်၊ စိတ်ပျော့တယ်ဆိုပေမယ့် မှီခိုချင်တဲ့သူတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစုက ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဝင်ငွေကိုယ်ရှာပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ နော် …… (၁) နှမြောတတ်တယ် ” ဒီလိုမိန်းကလေးတွေဟာ အရမ်းနှမြောတတ်တဲ့သူတွေပါ။ ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာလည်း […]
သင့်ရဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ သင်ရဲ့ အကြောင်း
သင့်ရဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ သင်ရဲ့ အကြောင်း ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်မျိုးစီနဲ့ တမူထူးခြားသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို တစ်ယောက်က မသိနိုင်သလိုပဲ ကျွန်မတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ကိုယ်ကို သတိမထားမိတာတွေ ရှိတတ်ပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ သဘာဝ နဲ့ စရိုက်ကို ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေက […]
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် မွေးရာပါပင်ကိုယ်အားသာချက်နဲ့ အမူအကျင့်များ
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် မွေးရာပါပင်ကိုယ်အားသာချက်နဲ့ အမူအကျင့်များ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားဟာသူ့ရဲ့ အမူအကျင့်၊ စိတ်နေစိတ်ထားအပေါ်ကိုလည်း အများကြီး သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် မတူညီတဲ့အားသာချက်တွေ၊ ဘဝခံယူချက်တွေနဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေရှိပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …… (၁) ဘီသွေး ” ဘီသွေးတွေဟာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ဥာဏ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေပါ။ အရာရာကိုစူးစမ်းလေ့လာတတ်ပြီး ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူတွေပါ။ […]
သင့်ကောင်မလေးကို စတွဲခါစကလို ချစ်စရာကောင်းနေစေချင်ရင် ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာပါ ….
သင့်ကောင်မလေးကို စတွဲခါစကလို ချစ်စရာကောင်းနေစေချင်ရင် ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာပါ …. ချစ်သူတွေတော်တော်များများဟာ စတွဲခါစမှာ အရမ်းအဆင်ပြေ၊ အရမ်းချစ်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်မဝဖြစ်နေတတ်ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ တဖြည်းဖြည်းသွေးအေးပြီး အချစ်တွေပေါ့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြသနာတွေမဖြစ်ချင်ရင်တော့ သင့်ဖက်က ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပါ နော် ….. (၁) စတွဲခါစကလို ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်မဆက်နိုင်ရင်တောင်မှ တစ်နေ့ကို ၃ကြိမ်လောက်တော့ […]
ပျက်စီးနေပြီးမရှည်လာတော့တဲ့ဆံပင်တွေကို ပြန်ရှည်လာစေမယ့်သဘာဝနည်းလမ်း(၃)မျိုး ပျိုမေတို့ဆံပင်လေးတွေ ဓာတုဆေးအမျိုးမျိုးနဲ့ထိတွေ့တာများလို့ ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင် ပြန်မရှည်လွယ်တော့ဘဲ အားနည်းသွားတာမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ ဆံပင်ပြန်မရှည်လာမှာစိုးလို့ ပျက်စီးနေတဲ့ဆံပင်တွေကိုတောင် မညှပ်ပစ်ရဲတော့ပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကို လုံးဝဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆံပင်အားနည်းနေလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူလေးတွေ အခုပဲလုပ်လိုက်တော့နော် …. (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ် ” ရှားစောင်းလက်ပပ်က ဦးရေပြားနဲ့ ဆံပင်အမြစ်တွေကိုအားဖြည့်ပေးပြီး အားနည်းနေတဲ့ဆံပင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ သန်မာလာစေပါတယ်။ […]
အချုပ်တရားခံအားလာတွေ့သူ အမျိုးသမီးကို မသင်္ကာလို့ မိန်းမကိုယ် ကို ရဲမေမှ စစ်လိုက်တဲ့အခါ ….
အချုပ်တရားခံအားလာတွေ့သူ အမျိုးသမီးကို မသင်္ကာလို့ မိန်းမကိုယ် ကို ရဲမေမှ စစ်လိုက်တဲ့အခါ …. အချုပ်တရားခံအား ဧည့်တွေ့လာသူ အမျိုးသမီး၏ မိန်းမကိုယ်အတွင်းမှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေပြား(၉၉)ပြား ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲတယ်လို့ သိရှိရပါတယ် …။ ဇွန်လ ၁၂ ရက် နေ့ခင်း ၁:၁၅ နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် […]
ချစ်သူကို SURPRISE လုပ်ဖို့သွားရာမှ မျက်ရည်လည်ရွဲဖြစ်ကာကြေကွဲခဲ့ရတဲ့ကောင်လေး နှလုံးသားအရေးမှာ ရင်နင့်နေအောင် ချစ်ရတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူလေးက တခြားတစ်ယောက်နဲ့သစ္စာဖောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးလောက် ဘယ်အဖြစ်အပျက်ကမှ ကြေကွဲစရာအကောင်းပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့တွေ့ရင်တော့ အကောင်း၊ နောက်ကွယ်မှာတော့ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်ထက်တောင်ကြည်နူးနေသေးတယ်ဆိုတာမျိုးက တွေးမကြည့်ရဲလောက်အောင် ဆိုးရွားလွန်းလှပါတယ်နော်။ အကယ်၍ ချစ်သူလေးကို အံ့သြသွားစေဖို့ သူမသိအောင် သွားတွေ့ကာမှ သူကတော့ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ […]